Imbewu emelana nokuguquka kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Umbhede wembewu ka-Arugula
Ezolimo ziyisihluthulelo ukuze isintu siqhubeke siphila, kepha futhi singenye yezinto ezingcolisa kakhulu. Cishe ingxenye yesithathu yokukhishwa kwegesi ebamba ukushisa ngenxa yalo msebenzi, okubandakanya ukwenziwa kwe-CO2 kusuka ekulimeni kanye nokusetshenziswa komanyolo wamakhemikhali okuthi, ngaphezu kokukhulisa ukutholakala kwe-nitrous oxide, kubangele ukulahleka kwenhlabathi.
Ngayo yonke into, Ama-20% ezinhlobo zezitshalo asengozini yokuqothulwa, Futhi ezinye eziningi zingaba maduze njengomphumela wokwanda kwamazinga okushisa kanye nezilimo. Ngenhlanhla, kunezinhlangano eziningana ezinikele ekuqoqeni imbewu nokuzigcina ezindaweni ezivikelekile, nokwakha izinhlobo ezintsha ezimelana nokuguquka kwesimo sezulu.
Enye yalezi zinhlangano yi Isikhungo Samazwe Ngamazwe Sezolimo ZaseTropical (I-CIAT) abasebenza ukugcina ifa lezakhi zofuzo nokuthuthukisa izinhlobo ezimelana nesomiso, izifo kanye nezimo ezahlukahlukene zemvelo ezingavela esikhathini esimaphakathi nesikhathi eside. Okwamanje, inezinkulungwane ezingama-37 zezinhlobonhlobo zobhontshisi namasampula ayizinkulungwane eziyisithupha zomdumbula.
Lezi zinhlobo zezikhungo zibaluleke kakhulu, ngoba ngenxa yazo abalimi bazokwazi ukuthola imbewu yezitshalo ezingazweli, okuyinto ngokungangabazeki ebaluleke kakhulu ukugwema ukulahleka komnotho. Noma kunjalo, Ama-30% ezihlobo zasendle eziyi-1076 zezitshalo ezingama-81 ezibaluleke kakhulu kusadingeka ziqoqwe, ngokusho kocwaningo olushicilelwe ku- Izimila Zemvelo. Izihlobo zasendle zinolwazi oluyigugu lofuzo olungasetshenziselwa ukuthuthukisa izitshalo ezingakwazi ukuzivumelanisa kangcono nokuguquka kwesimo sezulu.
Ngokukhetha imbewu, izinhlobo ezingcono zingatholakala.
»Ukutholakala kokudla emhlabeni kusesimweni esiyingozi, kuncike ezinhlotsheni ezimbalwa kakhulu zezitshalo ezilimekayo. Kuzo zonke izihlobo zasendle ezingalondolozwanga ebhange lomthombo futhi ezingatholakali ukucwaninga, kunendlela eyodwa encane kubalimi yokwandisa ukuqina kwezitshalo zokudla."Kusho uColin Khoury, usosayensi we-CIAT futhi obuye abe ngumbhali walo mbiko.
Kuyathakazelisa ukwazi ukuthi ngaphansi kwama-euro angama-600, ungagcina okuhlukahlukene kuze kube phakade. Kodwa-ke, kusazodingeka ukuthi silinde isikhashana ukuthola lezi "super seed".
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Imbewu emelana nokuguquka kwesimo sezulu
Ukuguquka kwesimo sezulu kuletha intwasahlobo phambili yezinkonjane